दिवालियापन ऐन र यसको प्रक्रियाहरु - Law & More B.V.
ब्लग » दिवालियापन ऐन र यसको प्रक्रियाहरु
दिवालियापन ऐन र यसको प्रक्रियाहरु
पहिले हामीलेaलेखेका थियौं परिस्थितिहरु को लागी एक दिवालियापन दायर गर्न सकिन्छ र यो प्रक्रिया कसरी काम गर्दछ को बारे मा ब्लग। दिवालियापन (शीर्षक I मा विनियमित) बाहेक, दिवालियापन ऐन (डच फेलिसमेन्ट्सवेट, पछि 'एफडब्ल्यू' को रूपमा उल्लेख गरीएको छ) सँग दुई अन्य प्रक्रियाहरु छन्। अर्थात्: स्थगन (शीर्षक II) र प्राकृतिक व्यक्तिहरु को लागी debtण पुनर्गठन योजना (शीर्षक III, जसलाई Debण पुनर्वितरण प्राकृतिक व्यक्ति अधिनियम वा डच मा पनि भनिन्छ गीला Schuldsanering Natuurlijke Personen 'WSNP')। यी प्रक्रियाहरु बीच के फरक छ? यस लेखमा हामी यो व्याख्या गर्नेछौं।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, Fw दिवालियापन प्रक्रिया को नियमन गर्दछ। यी कार्यवाहीहरु लेनदारहरु को लाभ को लागी torणी को कुल सम्पत्ति को एक सामान्य संलग्नक entail। यो एक सामूहिक निवारण को लागी चिन्ता छ। जे होस् सम्भावना सधैं existsणदाताहरु को लागी दिवालियापन को बाहिर व्यक्तिगत रूप मा निवारण को लागी नागरिक प्रक्रिया संहिता को प्रावधानहरु को आधार मा (डच मा Wetboek भ्यान Burgerlijke Rechtsvordering वा 'Rv'), यो सधैं एक सामाजिक वांछनीय विकल्प छैन। यदि एक सामूहिक निवारण संयन्त्र राखिएको छ, यो एक लागू गर्न योग्य शीर्षक र यसको प्रवर्तन प्राप्त गर्न को लागी अलग कार्यवाही को एक धेरै बचाउँछ। यसबाहेक, debणी को सम्पत्ति व्यक्तिगत लेनदेन को विपरीत, जहाँ प्राथमिकता को कुनै क्रम छैन, लेनदारहरु को बीच उचित रूप मा विभाजित छन्।
कानून मा सामूहिक निवारण को यो प्रक्रिया को लागी धेरै प्रावधानहरु सामेल छन्। यदि दिवालियापन आदेश दिइएको छ, torणी अनुच्छेद २३ परिवार कल्याण को अनुसार रिकभरी को लागी खुला सम्पत्ति (सम्पत्ति) को निपटान र व्यवस्थापन गुमाउँछ। यसको अतिरिक्त, यो अब सम्भव छैन कि लेनदारहरु लाई व्यक्तिगत रूप मा निवारण को लागी खोज्न को लागी, र दिवालियापन भन्दा पहिले गरिएका सबै संलग्नकहरु रद्द गरिएका छन् (अनुच्छेद 23 Fw)। दिवालियापन मा लेनदारहरु को लागी आफ्नो दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न को लागी मात्र प्रमाण को लागी यी दावी पेश गर्न को लागी (अनुच्छेद २ F परिवार कल्याण) हो। एक दिवालियापन फैसिलिटेटर लिक्विडेटर नियुक्त गरिएको छ जसले प्रमाणिकरण मा निर्णय गर्दछ र संयुक्त लेनदारहरु (अनुच्छेद 33 Fw) को लाभ को लागी सम्पत्ति को ब्यबस्थापन र व्यवस्थित गर्दछ।
दोस्रो, FW अर्को प्रक्रिया प्रदान गर्दछ: भुक्तानी को निलम्बन। यो प्रक्रिया दिवालियापन जस्तै torणी को आय वितरण गर्न को लागी होइन, तर उनीहरुलाई कायम राख्न को लागी हो। यदि यो अझै पनी रातो बाट बाहिर निकाल्न सम्भव छ र यस प्रकार दिवालियापन बाट बच्न को लागी, यो केवल एक देनदार को लागी सम्भव छ यदि उसले वास्तव मा आफ्नो सम्पत्ति को संरक्षण गर्दछ। तेसैले एक torणी एक स्थगन को लागी आवेदन दिन सक्छ यदि ऊ एक स्थिति मा छैन जहाँ उसले आफ्नो payingण तिर्न बन्द गरीएको छ, तर यदि उसले भविष्यवाणी कि उनी भविष्य मा यस्तो स्थिति मा हुनेछन् (अनुच्छेद २१४ परिवार कल्याण)।
यदि स्थगन आवेदन दिईएको छ, debणी theण स्थगन द्वारा कवर दावीहरु तिर्न बाध्य हुन सक्दैन, फौजदारी निलम्बन गरीएको छ, र सबै संलग्नक (सावधानी र लागू) रद्द गरीएको छ। यसको पछाडि विचार यो हो कि दबाब हटाएर, त्यहाँ पुनर्गठन को लागी कोठा छ। जे होस्, धेरै जसो केसहरुमा यो सफल हुदैन, किनकि यो अझै पनी सम्भव छ कि दावी लागू गर्न को लागी प्राथमिकता संलग्न छ (उदाहरण को लागी प्रतिधारण को अधिकार वा प्रतिज्ञा वा बंधक को अधिकार को मामला मा)। एक स्थगन को लागी आवेदन यी लेनदारहरु को लागी अलार्म घण्टी बन्द गर्न सक्छ र यसैले उनीहरुलाई भुक्तानी मा जोड दिन को लागी प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, यो केवल सीमित हदसम्म सम्भव छ debणी को लागी आफ्ना कर्मचारीहरु लाई पुनर्गठन गर्न को लागी।
प्राकृतिक व्यक्तिहरुको debtण पुनर्गठन
Fw मा तेस्रो प्रक्रिया, प्राकृतिक व्यक्तिहरु को लागी debtण पुनर्गठन, दिवालियापन प्रक्रिया जस्तै छ। किनभने कम्पनीहरु दिवालियापन प्रक्रिया को समाप्ति को माध्यम बाट भंग गरीएको छ, लेनदारहरु लाई अब एक torणी छ र आफ्नो पैसा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो निस्सन्देह, एक प्राकृतिक व्यक्ति को लागी मामला हैन, जसको मतलब हो कि केहि देनदारहरु लाई आफ्नो बाँकी जीवन को लागी लेनदारहरु द्वारा पछ्याउन सकिन्छ। यसैले, एक सफल निष्कर्ष पछि, debणी theण पुनर्गठन प्रक्रिया संग एक सफा स्लेट संग शुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सफा स्लेट को मतलब छ कि torणी को अवैतनिक tsण प्राकृतिक दायित्व मा परिणत हुन्छ (अनुच्छेद ३५358 परिवार कल्याण)। यी कानून द्वारा लागू गर्न योग्य छैनन्, त्यसैले उनीहरुलाई मात्र नैतिक दायित्व को रूप मा देख्न सकिन्छ। आदेश मा यो सफा स्लेट प्राप्त गर्न को लागी, यो महत्वपूर्ण छ कि torणी को व्यवस्था को अवधि मा सकेसम्म धेरै आय स collect्कलन को लागी सकेसम्म धेरै प्रयास गर्दछ। यी सम्पत्ती को एक ठूलो भाग तब मात्र दिवालियापन प्रक्रिया मा, जस्तै तरलिएको छ।
Debtण पुनर्संरचना अनुरोध मात्र दिइनेछ यदि debणीले अनुरोध भन्दा पहिले पाँच बर्षमा राम्रो विश्वासमा काम गरेको छ। धेरै परिस्थितिहरु यस मूल्या in्कन मा ध्यान मा राखीएको छ, includingण वा तिर्न असफलता निन्दा योग्य छ र यी payण तिर्ने प्रयास को हद सहित। राम्रो विश्वास को दौरान र पछि कार्यवाही पछि महत्वपूर्ण छ। यदि त्यहाँ कार्यवाही को दौरान राम्रो विश्वास को कमी छ, कार्यवाही समाप्त गर्न सकिन्छ (अनुच्छेद 350 अनुच्छेद3परिवार कल्याण)। अन्त मा राम्रो विश्वास र कार्यवाही पछि पनि प्रदान र सफा स्लेट को रखरखाव को लागी एक शर्त हो।
यस लेखमा हामीले Fw मा बिभिन्न प्रक्रियाहरु को एक छोटो व्याख्या दिएका छौं। एक तरफ त्यहाँ परिसमापन प्रक्रियाहरु छन्: सामान्य दिवालियापन प्रक्रिया र naturalण पुनर्निर्धारण प्रक्रिया जो केवल प्राकृतिक व्यक्तिहरु लाई लागू हुन्छ। यी कार्यवाहीहरुमा torणी को सम्पत्ति संयुक्त लेनदारहरु को लाभ को लागी सामूहिक रूप मा समाप्त गरीन्छ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ भुक्तानी प्रक्रिया को निलम्बन छ, जो असुरक्षित लेनदारहरु प्रति भुक्तानी दायित्व 'पज' गरेर, debणी लाई आफ्नो मामिला क्रम मा प्राप्त गर्न को लागी सक्षम बनाउन सक्छ र यस प्रकार एक सम्भावित दिवालियापन बाट बच्न सक्छ। के तपाइँ Fw र यो प्रदान गर्ने प्रक्रियाहरु को बारे मा कुनै प्रश्न छ? त्यसपछि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रा वकिलहरु दिवालियापन कानून मा विशेषज्ञता प्राप्त छन् र तपाइँलाई मद्दत गर्न खुसी हुनेछन्!
अघिल्लो पोस्ट सामान्य नियम र खरीद को शर्तहरु: B2B
अर्को पोस्ट गैर प्रतिस्पर्धा खंड: तपाइँ के जान्न आवश्यक छ?